Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » Ọtụtụ ndị Britain agaghị akwado azụmaahịa ndị a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Ọtụtụ ndị Britain agaghị akwado azụmahịa ndị agbabeghị ọgwụ
Ihe na -erughi ọkara ndị Britain kwupụtara na ha dị njikere ịnọgide na -eji ọkachamara na -agbanyeghị ọgwụ mgbochi.
22% nke ndị na -aza ajụjụ kwuru na nke ahụ "n'ezie" agaghịzi eji ọrụ ndị ọkachamara agbabeghị ọgwụ.
29% nke ndị na -aza ajụjụ kwuru na "ọ ga -abụrịrị" zere ndị ọkachamara na -agbanyeghị ọgwụ mgbochi.
20% nke ndị Briten '' nwere ike '' jiri ụlọ ọrụ na -agbabeghị ọgwụ mgbochi.
Dị ka ntuli aka ọhụrụ emere ma biputere ụnyaahụ, ihe karịrị pasenti iri ise nke ndị bi na UK agaghị alaghachi azụmaahịa ha jiri mee n'oge gara aga ma ọ bụrụ na agbanyeghị onye na -azụ ahịa ahụ ọgwụ mgbochi.
Dị ka obodo na -aga n'ihu na -ekpo ọkụ na gọọmentị Ihe mgbochi COVID-19 na azụmahịa na mmegharị, ihe na -erughi ọkara ndị Britain kwupụtara njikere ha ga -aga n'ihu na -eji ọkachamara na -agbanyeghị ọgwụ mgbochi.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ (22%) nke ndị a gbara ajụjụ ọnụ kwuru na ha '' agakwaghị '' emekọrịta ihe na ndị ọkachamara na -agbanyeghị ọgwụ mgbochi, ọbụlagodi na ha nwere azụmahịa dị mma n'oge gara aga.
N'ịchọpụta ndị okenye Britain 4,631, ntuli aka ahụ chọpụtara na ọtụtụ - 29% - nke ndị zara zara kwuru na ha "agaghị enwe ike" ọzọ na -ejikwa ọkachamara ahụ ha na -akwadobu na -ama na ha "ewereghị na ha agaghị ewere COVID. -19 ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. ”
20% nke ndị Britain nọ na ngere, na -ekweta na ha 'ga -aga n'ihu na -eji' onye ọkachamara, ebe 14% ga -arapara n'ahụ ọkachamara ha, gbaa ya ma ọ bụ gbaghị ya. Ndị fọdụrụ ejighị n'aka-mana ha nwere ike mee mkpebi n'oge adịghị anya, ebe gọọmentị UK na-aga n'ihu na-atụgharị akwụkwọ ikike ngafe ọgwụ mgbochi mba mgbe ha kwupụtasịrị na ha ga-alaghachi ebe a na-eme mkpọtụ mgbe mkpọchi mkpọchi gasịrị.
Ndị na -aza ajụjụ na ndịda nke England yikarịrị ka ha ga -agbagha megide ndị ọkachamara ha na -agbanyeghị ịgba ọgwụ mgbochi, ebe ndị nọ na mgbago ugwu yikarịrị ka ha na ha ga na -arụkọ ọrụ. N'otu aka ahụ, ndị ntuli aka na -achọghị mgbanwe nwere ike idobe ndị ọkachamara ha, ebe Liberal Democrats nwere ike tufuo ha n'akụkụ.
Ndị na -aza ntuli aka yiri ka ha na -anabatawanye mmachibido nke steeti tinyere n'ọrụ ha, ebe 60% doro anya na -akwado “paspọtụ ọgwụ mgbochi” maka onye ọ bụla na -eleta ebe a na -elekọta ndị agadi, mgbatị ahụ, oghere ihe omume, ụlọ mmanya, ụlọ nri, ma ọ bụ ebe nnọkọ ọha ọzọ na ntuli aka ọzọ. nke YouGov duziri n'izu gara aga. Agbanyeghị, edepụtara ajụjụ ahụ n'ụzọ dịtụ iche, na-ekwusi ike na enweghị njedebe ngwụcha doro anya maka iji paspọtụ dị otú ahụ site na ịjụ ndị na-aza ajụjụ naanị ma ọ bụrụ na ha kwadoro paspọtụ ọgwụ mgbochi n'oge mwepụ nke jab.
Ndị Britain agaghị abụ ndị mbụ ga -etinye usoro paspọtụ ọgwụ mgbochi etinyeghị ntinye n'aka ndị ntuli aka. Andtali na France anabatala akwụkwọ ikike ahụike n'agbanyeghị ngagharị iwe buru ibu, yana ụfọdụ steeti na ime obodo US New York City agbaala ụlọ ọrụ ndị America nkeonwe ume ka ha jiri paspọtụ ahụike nke ha mee ka ikike ịgba ọgwụ mgbochi pụta. Steeti ndị ọzọ agbalila machibido akwụkwọ ikike ngafe dị otú a, na -eduga gọọmentị etiti ka (maka ugbu a) hapụ ya na steeti na azụmaahịa.